We are walking in hell but we are happy gazing at flowers
The title ofashort clip during our first discussion of E4E3G reminded me the great insight I have been familiar with long ago. Thanks to Nay Yu who brought it before my eyes. While I was watching, the flow of thoughts seamlessly flowed into my mind very loudly describing the above words vividly. Suddenly I felt I was enlightened.
“Never forget: we walk on hell, gazing at flowers”. Those words are from Kobayashi Issa,aJapanese poet and lay Buddhist priest of the Jōdo Shinshū sect from the 18th Century. His words reminded me plainly the world we live. In the true form beyond our human knowledge and reason, life we live is suffering itself and our mere existence is an illusion. But we do not and cannot see it due to so much hatred, greed and delusion we have. These three biggest foes within trick our minds to believe that what we see, hear and taste are all real. For billions, this is the Truth we discern. Our earthly knowledge and reason limits what we can think, know and see.
Without the transcendence of Buddha and alike, the world we live would have been shrouded with the darkness making all of us blind preventing from seeing the Truth. Only mindfulness through deep meditation can enlighten us to see what we really are.
To beamindful person is easier said than done. Incessant efforts, enduring attempts, unfailing self-determination and consistent consciousness are the keys in raising awareness of self. In other words, the process of “know thyself” needs tremendous endeavor. By knowing all little our continuous movements asaprocess of dying and rebirth, we can be enlightened. A pair of mindful eyes with wisdom can see the world in its true form depicting our lives asamere illusion.
Whatathought I have out of the title! In fact it served me well asatimely reminder of being. Without knowing its true form of our existence and enjoying earthly pleasure, we are as if walking on hell and gazing at flowers. As I have lived more than half of our anticipated life span, not to die asamundane person, I must strive to live the Way Buddha and alike higher beings illuminated through their own life experiences.
I believe that living by Buddha’s principles and sharing good deeds to others will bring true wisdom and mindfulness to all of us one day.
Max |7January 2013
Posted by Maung Max @ Mr Puki at 8:29 AM No comments:
မဟာရံတတိုင်း၊ ဧရာဝတီ နှင့် ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါး။
၀တို့ပြည်က ခင်မင်ရင်းနှီးရတဲ့ သူငယ်ချင်းမတစ်ယောက်နဲ့ စကားလက်ဆုံကျခဲ့တုန်းကပေါ့ . . .
ဟဲ့အဆွိ . .နင်တို့တိုင်းပြည်က မဟာရံတံတိုင်းကြီးက အရမ်းကိုကြီးကျယ်ခန့်ငြားလိုက်တာဟာ။
အင်းဟုတ်တယ် ပဉ္စရဲ့။ ဒီမဟာရံတတိုင်းကြီးက ငါတို့တမျိုးသားလုံး မျိုးရိုးစဉ်ဆက် အလေးအမြတ်ထားပြီး ငါတို့တရုတ်ပြည်ကြီးရဲ့ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ခမ်းနားမှုကို ထည်ထည်ဝံ့ဝံ့နဲ့ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစရာကြီးလေဟာ။
အင်း . . နော်။ ငါတို့မြန်မာပြည်မှာလည်းဟာ အိမ်နီးနားချင်း ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်နိုင်ငံကြီးတစ်ခုက ကျောက်တွင်းတွေ ရက်ရက်စက်စက်တူး၊ မတရားတောင်တွေဖြို၊ တရားဝင်သလိုလိုနဲ့ မတရားသစ်တွေ ပေါ်ပေါ်တင်တင် ခိုးထုတ်နေတော့ ရှိသမျှသယံဇာတတွေ တဖြုန်ဖြုန်ကေးနေပြီဟ။ ခု ငါတို့နိုင်ငံရဲ့ ဒီမီုကရေစီ အစိုးရသစ်လက်ထက် တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါ လုံလောက်တဲ့ သစ်ပင်တွေမရှိတော့လို့ အဆာက်အဦသစ်တွေဆောက်၊ တံတားတွေတည်၊ လမ်းတွေဖေါက်ရာ မှာ အခက်အခဲအတော်ရှိနေတယ်ဟ။
သစ်ပင်တွေမရှိတော့တာနဲ့ ဘာဆိုင်လို့တုန်း ပဉ္စရဲ့။
အဆွိနင်ကလည်း ဒီလို အဆောက်အဦကြီးတွေ တည်ဆောက်တယ်ဆိုတာ အုတ်တွေ ကျောက်တွေ သဲတွေလိုတယ်လေဟာ။ ဒါမှ တည်ဆောက်လို့ရ တော့မှာပေါ့။ အခု သစ်ပင်တွေအလုံအလောက် မရှိတော့လို့ အုတ်ဖုတ်ဖို့တောင် မဖြစ်နိုင်ပဲ တော်တော် အခက်တွေနေပြီလို့ သိရတယ်ဟ။ အဲဒါ ငါ စဉ်းစားမိတာတစ်ခုက နင်နဲ့ ငါနဲ့ အကျိုးတူစီးပွားရေး ကုမ္ပဏီထောင်ပြီး နင်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ လူလည်းသိပ်မသုံးတဲ့အပိုင်းက မဟာရံတံတိုင်းကြီးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို လေလံပစ်ပြီး လိုတဲ့အုတ်တွေ ငါတို့ နိုင်ငံ ပြန်လည် တည်ဆောက်မှုမှာ သုံးချင်လို့ဟ။ နင်တို့ဆီက ပါတီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်ပါလား။ နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူစီးပွားပေါ့။
ဘာ… ဒါငါတို့ရဲ့ သမိုင်း၊ ငါတို့လေးစားမြတ်နိုးတဲ့ မဟာရံတံတိုင်း၊ ငါတို့ လူမျိုးစုရဲ့ ကြီးကျယ်ခန့်ငြားမှုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သမိုင်းမှတ်တိုင်ဟဲ့။ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရရ နင့်တိုင်းပြည်ကြီး ပုံပေးအုံးဟာ မဟာရံတံတိုင်းက အုတ်တစ်လုံးတောင်မရဘူး.. မှတ်ထား။
သြော် . . . အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ် တယ်ပြင်းတဲ့ အဆွိရယ် နင်သာ ငါတို့တိုင်းပြည်က လျပ်စစ်ဝန်ကြီး လုပ်လိုက်ပါတော့လားဟုသာ ငြီးတွားရင်း မျက်နှာနီရဲနေတဲ့ တရုတ်မကို ဘိုင်ဘိုင့်မလုပ်ပဲ ကျောခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ကျင့်ဝတ်ကို အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့ ဖုံးအုပ်လေ့ရှိသလို သူ့ပြည်တွင်းရေး ဒို့ဝင်မစွက်ပေါင် လို့တွင်တွင်ပြောပြီး ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ်ကနေ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားဆိုတာချည်းအတွက် ရသမျှ သမလေ့ရှိသလို အဆိပ်ပင်ရေလောင်းလည်း လုပ်တတ်ပါတယ်ဆိုတာကို မေ့ထားလို့မရပါဘူး။
တကယ်တော့ နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ အားလုံးနီးပါးလိုလိုဟာ “ငါတို့မှာ ထာဝရမိတ်ဆွေဆိုသည်မရှိ၊ ထာဝရ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားသာလျင်ရှိ၏” ဆိုသလို ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင် ပြီးရောသဘောလုပ်သာ ခံယူလေ့ပဲရှိတတ်ကြပါတယ်။ ရ၀န်ဒါမှာ မျိုးနွယ်စုလိုက် သတ်ဖြတ်ဖို့အတွက် ဓါးတွေ သိန်းနဲ့ သန်းနဲ့တင်သွင်းပေးတာမျိုး၊ လစ်ဗျားက အစိုးရက လစ်ဗျားပြည်သူတွေကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်နိုင်ဖို့အတွက် ကျည်ဆံတွေ၊ လက်နက်တွေ အားရပါးရရောင်းတာမျိုး၊ နူကလီယားဘန်းပြပြီး နိုင်ငံတကာမှာ လူမိုက်မွေးထားတာမျိုး စသဖြင့် စသဖြင့် ဥပမာ ဥပမေယျတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
တကယ်တော့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားဆိုတာ အဲဒီတိုင်းပြည်မှာမှီတင်းနေထိုင်တဲ့ အမျိုးသားတိုင်းနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ အဆွိ တစ်ယောက် ဒေါသထွက်သွားမယ်ဆိုလည်း ထွက်သင့်စရာပါ။ သူလည်း သူ့တိုင်းပြည်က အမျိုးသား အဲလေ အမျိုးသမီးကိုး။ ဒါဟာ အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်ကို ထိကပါ ယိကပါး လေနဲ့ သွားလုပ်မိလို သူ့ရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်က ခွန်းတုန့်မခံ တုန့်ပြန်လိုက်တာပါ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင်အကြီးအကဲများကလည်း ဘယ်လောက်အမြော်အမြင်ကြီးမားကြသလဲ ဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီမရခင် ဟိုးပဝေသဏီထဲက အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားတို့ အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်တို့ကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အလို့ငှာ ၀ံသာနုရက္ခိတစိတ်ဓါတ် ပြင်းထန်လာစေဖို့ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံးအား ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါးကို နေ့စဉ် စဉ်ဆက်မပြတ် နေရာမလပ်စေပဲ အသိပေးပြီး လေ့ကျင့်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး - ဒို့အရေး။
ကဲကြည့် ခု ပြည်သူလူထုက ကိုယ်သွေးကိုယ်ဖောက်ပြီးမှ ရေသောက်ရမယ်ဆိုရင် ရေငတ်လည်း ငတ်ပစေ အသေခံမယ်လို့ ဆိုသလို ဧရာဝတီကို နှိပ်စက်ကလူလုပ်ပြီးမှ ရလာမဲ့ လျပ်စစ်ကို မသုံးရလည်းနေပါစေ ဒီလိုပဲ ဖယောင်းတိုင်းနဲ့ ကျေနပ်ပါတယ်လို့ ဆိုနေတဲ့ကြားက လူထုက ရွေးကောက်ထားတဲ့ ၀န်ကြီးဆိုသူက နေမကောင်းပါဘူးဆိုမှ ဇွတ် ဆိုသလို ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုတာချည်းဆိုတော့ လူထုနဲ့ အစိုးရကြားမှာ ကွဲလွဲမှုတွေရှိလာပြီ။ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်ကို ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ ဗြိတိသျှတွေက ဖိနပ်ကြီးတွေစီးပြီးတက်ကြတော့ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကြပြီး လူထုအုံကြွလို့ ကိုလိုနီလိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တွေတောင် လူထုဖက်လိုက်ရောခဲ့သေးတယ်ဗျာ။ တစ်ဖက်က တစ်ဖက်ကို မလိုက်ရောရင် အက်ကြောင်းရဲ့နိဒါန်း စတဲ့ပဲဗျ။ ဒီတော အချိန်များစွာယူပြီး တည်ဆာက်ထားရတဲ့ အနှစ်သာရအပြည့်အ၀နဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး မပြိုကွဲဖို့ ပြည်သူလူထုက သောင်းသောင်းဖျဖျ ရွေးကောက်ထားတဲ့ အစိုးရက လူထုဖက်လိုက်မလား၊ လူထုက အစိုးရဖက်လိုက်မလား။ ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး ဒို့အရေးပေါ့။
အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး - ဒို့အရေး။
တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ အခြားနိုင်ငံအခြေစိုက်လုပ်ငန်းတစ်ခုက နှစ်ရှည်လာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် လက်ခံထားတဲ့ တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားအလို့ငှာ အခြေစိုက်လုပ်ကိုင်မဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် ကန့်သတ်လေ့ရှိပါ တယ်။ ဥပမာ နိုင်ငံခြားအလုပ်သမား ဘယ်လောက်ပဲခန့်ရမယ်ဆိုတာမျိုး။ ဘယ်အဆင့်ကနေ ဘယ်အဆင့်ထိကို နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေနဲ့ လွတ်လပ်စွာ စစ်ဆေးခြယ်လှယ်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ စသဖြင့် စသဖြင့်ပေါ့လေ။ ခုတော့ စကတည်းကို ကိုယ့်နိုင်ငံလဲလာလုပ်သေး၊ ကိုယ့်သွေးသားတိုင်းရင်းသားတွေကလဲ နေရာလည်းဖယ်ပေးရသေး၊ အမယ် နေရာတကာမှာ သူ့အမျိုးသားစာတမ်း၊ သူအမျိုးသားဆိုင်းဘုတ်၊ သူ့အလုပ်သမား၊ သူ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့ သူ့အဖိုးပိုင်တဲ့မြေ အမွေရလို့ လာရှင်းနေသလိုမျိုး လုပ်ချင်တိုင်းလာလုပ်နေမှတော့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိကပါး ယိကပါးလုပ်နေသလိုချည်း ဖြစ်နေတယ်လို့ချည်း ခံစားလာရတယ်။ အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး - ဒို့အရေး။
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေး - ဒို့အရေး။
ကဲကြည့်ဗျာ။ နောက်ပြီး နဂိုတည်းကို ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ တည်ဆောက်ရယူထားရတဲ့ သွေးချင်းများကြားက ဗမာလူမျိုးတွေအပေါ် ယုံကြည်မှုဟာ ကချင်အမျိုးသားတွေရဲ့ သမိုင်း ဓလေ့ထုံတမ်းစဉ်လာ ကြီးမားတဲ့ မြစ်ဆုံလိုနေရာမျိုး၊ ပြီးတော့ မြစ်ကြီးနားလို အထက်ကရ မြို့ကြီးတစ်ခုလုံးကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ ရေမြုပ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ အန္တရာယ်တောထဲ တွန်းပို့နေတာမျိုးတွေနဲ့တင် ပြန်လည် တည်ဆောက်ရယူနိုင်ဖို့ အတော့်ကိုခဲယဉ်းသွားပြီ။ ကျန်တဲ့ ညီနောင်သားချင်းတွေကလည်း တွေးပြီ။ ဒါကုန်သွားရင် ငါတို့ပိုင်တဲ့ဘက်တွေ လှည့်လာနိုင်တယ် . . . ဒီလိုနဲ့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု ပြိုကွဲမှုဆီ ဦးတည်ရပြန်ရော။ ဒီတော့ကာ ဒါမျိုးမဖြစ်အောင် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေး - ဒို့အရေး။
ဧရာဝတီဟာ မြန်မာတို့ရဲ့အစ၊ ဧရာဝတီဟာ မြန်မာတို့ရဲ့သမိုင်း၊ ဧရာဝတီဟာ မြန်မာတို့ရဲ့မာတာမိခင်၊ ဧရာဝတီဟာ မြန်မာတို့ရဲ့ဘ၀၊ ဒါကြောင့်မို့ ဧရာဝတီအရေးဟာ မြန်မာ့အရေးဖြစ်တယ်။ အမျိုးသားရေး အစစ်ဖြစ်တယ် ဧရာဝတီကို ထိလို့နာတာ၊ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ခွန်းတုံ့မခံပြောတာဟာ မျိုးချစ်စိတ်အစစ် ကလာတာဖြစ်တယ်။
အဆွိလို တရုတ်မတောင် မဟာရံတံတိုင်းကို စကားနဲ့တောင် တင်စီးမခံရင် မြန်မာ့အရေးတစ်ခုလုံးကို ကျွန်တော်တို့က လက်ပိုက် ခေါင်းငိုက်စိုက်ချပြီးကြည့်နေသင့်ပါသလား။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈၈၅မှာတုန်းက ဗြိတိသျှတွေက သေနတ်တစ်ချက်မဖေါက်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုလိုနီကျွန်ဇာတ်သွင်းခဲ့တယ်။ အခုလည်း သေနတ်တစ်ချက်မဖောက်ပဲ အခြားနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ လက်အောက်ခံ ဆက်ကြေးသွင်း ခရိုင်အဆင့်သာသာ ပြည်နယ်တစ်ခု အဖြစ် မသိမသာ သွတ်သွင်းခံနေရတာကို လက်ပိုက် ခေါင်းငိုက်စိုက်ချပြီးကြည့်နေရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားနေ့ နောက်တစ်ရက်ထပ်တိုးဖို့ပဲကျန်တော့တယ်။
အဲလိုနဲ့ အဆွိပြောသွားတဲ့ စကားတွေပြန်ကြားရင်း . . .
ထပ်တော့မပြောလိုက်တော့ပါဘူး။ ငါက လေနဲ့တင်ရှိသေးတာဟလို့ . . .
၂၀၁၁ခု၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ရက်။
Posted by Maung Max @ Mr Puki at 8:07 AM No comments:
Labels: Irrawaddy, Journal, Patriotism
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံဒေသတွင် ဆည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မျက်နှာစာအုပ်ပေါ်ရှိ စစ်တမ်းကောက်ခံမှုအား ယနေ့ ၁၂-၈-၁၁ နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန်ည ၁၀နာရီတိတိအချိန်ထိ စစ်တမ်း ကောက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ -
ပါဝင်ဖြေဆိုသူ စုစုပေါင်း - ၃၁၆၄
ဆက်လက်မတည်ဆောက်သင့်ပါ -၂၉၄၈ (၉၃ %)
ဆက်လက်တည်ဆောက်သင့်ပါသည် - ၉၆ (၃%)
မိမိတို့နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ - ၁၂၀ (၄%)
သဘောထားတစ်ခုပေါ်တွင် မိမိ၏ခံယူချက်၊ အမြင်များပေါ်မူတည်၍ မတူညီသောတုန့်ပြန်မှုများရရှိခြင်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဟု ခံယူမိပါသည်။ ထို့အတူ မိမိ၏ ထင်မြင်ချက် ခံစားချက် ယုံကြည်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ ခြိမ်းခြောက်ဖျားယောင်းမှုမရှိဟု တွေးထင်ယူဆမိ၍ မိမိ၏ဆန္ဒသဘောထားကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ထုတ်ဖော်ဝံ့ကြ သူများ ဖြစ်သဖြင့် လေးစားမိပါသည်။
မတူညီသော အတွေးအမြင်များစုစည်း၍ ဖွံ့ဖြိုးသောနိုင်ငံအဆောက်အဦးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ခြင်းသည် အဆင့်အတန်းမြင့်မား၍ အမြင်ကျယ်သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းမှသာလျင် တည်ဆောက်နိုင်၍ ရပါသည်။ အာဏာရှင်ဆန်သော တစ်သွေး တစ်သံ တစ်မိန့်ဖြင့် ချီတက်လျက်ရှိသော စေစားခံ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်မှု အမြင်မတူလျင် ငါနှင့်မတူ ငါ့ရန်သူဟု ယူဆကြလျက် အမြင်များကွဲ သွေးစည်းမှုများကွဲပြီး ရည်မှန်းရာပန်းတိုင်သို့ မရောက်သို့မရောက်နိုင်ပဲ အစည်းပြေသည့် လူအဖွဲ့အစည်းပုံစံ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာကြရပါသည်။ ဆန္ဒသဘောထားဖော်ထုတ်မှုအရ အများဆန္ဒသည် အဓိဖြစ်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ရေများရေနိုင်၊ မီးများမီးနိုင်ဟုသဘောထားပါက အမြင် ယုံကြည်ချက် မတူသူများအကြား အညိုးအတေးများစွာဖြစ်ပေါ်လာစေပြီးတင်းမာသည့်သဘောဆောင်သည့် လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မာမှုကို ရနိုင်ရန်ခဲယဉ်းလှပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ အမြင်မတူသူများနှင့် ယုံကြည်ချက်မတူသူများ အကြား ရင်ကြားစေ့နိုင်သည့် အဓိက အချက်မှာ မိမိသဘောထား၏ အကြောင်းရင်းခံများကို ပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေး တိုင်ပင် ညှိနှိုင်း၍ မတူသူအုပ်စုကွဲများ အတွင်း တစ်ဖက်ဖက်ကို ထိခိုက်နစ်နာမှုနည်းနိုင်သမျှ အနည်းဆုံးရှိသည့် အဖြေကို ပူးပေါင်း ရှာနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ အကြောင်းရင်းခံများကို ဆန်းစစ်ရာတွင် ဘာကြောင့် သို့မဟုတ် အဘယ်ကြောင့် မိမိက ယခုကဲ့သို့ ဆန္ဒသဘောထားကို ထုတ်ဖော်ရပါသည်ဟု အကြောင်းရင်းကို တိတိကျကျ ပွင့်လင်းစွာပြောဆိုနိုင်မှုသည် အဓိကကျပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ အထက်ပါ စစ်တမ်းတွင်ဖြေကြားသူများအနက်မှ ဆက်လက်မတည်ဆောက်သင့်ပါဟု သဘောထား ခံယူသူများ၏ အကြောင်းရင်းခံများမှာ ကမ္ဘာ့အရပ်ရပ်ရှိ ပစ္စက္ခ ဆည်များ၏ ဆိုးကျိုးများပေါ်အခြေခံလျက် ဆည်ဆက်လက်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လူမျိုးကိုသော် လည်းကောင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုသော်လည်းကောင်း ထိခိုက်နစ်နာနိုင် သည်ဟု တွေးထင် ယူဆမိပါသည်။
အဆိုပါအချက်များနှင့် လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲ၍ ဆက်လက်မတည်ဆောက်သင့်ပါ သို့မဟုတ် မိမိနှင့် မသက်ဆိုင်ပါဟု ဆန္ဒသဘောထားကို ဖော်ထုတ်ထားသူ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအနေဖြင့် ဘာကြောင့် သို့မဟုတ် အဘယ်ကြောင့် ကျွန်တော်/ကျွန်တော်မတို့က ယခုကဲ့သို့ သဘောထားရပါသည်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆို၍ အပြုသဘောဆောင်ပြောဆိုဆွေးနွေးကြမည် ဆိုလျင် အမြင်မတူသူများကြား ရှဉ့်လည်းလျောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာ ဆိုသည့် စကားနှင့်အညီ ယုံကြည်ချက်မတူညီသော်လည်း လိုရာပန်းတိုင်ကို ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာဖြင့် ရေရှည်လှမ်းနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းများ ပွင့်လင်းလာနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။
၂၀၁၁ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၂ရက်။
Posted by Maung Max @ Mr Puki at 8:57 AM No comments:
Labels: Journal, Patriotism
တာလစ်ရဲ့ ငန်းနက်တွေ မြန်မာပြည်မှာ မြူးနေပြီပေါ့ . . .
မနေ့က ကြယ်တွေ အစင်းလိုက် အစင်းလိုက် ညွတ်တွားရင်း
မဟတ္တမဂန္ဒီက ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ သူ့သီအိုရီမှန်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောသတဲ့။
မနေ့က မြူတိမ်ကင်းစင်ပြီး လသာသာအောက်မှာ
တာလစ်ရဲ့ ငန်းနက်တွေ ပျံမြူးနေကြသတဲ့ အမေ။
အမေ့ ခြေလှမ်းသစ်တွေအတွက် ဂုဏ်ယူတယ်အမေ။
ငှက်တွေဆိုတာ ပျံရင်းသေကြသတဲ့ . . .
ရွှေဘုန်းလူရဲ့ဆန္ဒအိပ်မက် ဆက်မက်နေမိရင်း . . .
ခွပ်ဒေါင်း ကိုတော့ လူနီရိုင်းတွေရဲ့ သမိုင်းထဲက
ဖီးနစ်ငှက်လို မီးထုံကူးပြီး အမြဲဝံ့ကြွားစေချင်တယ် အမေ။.
နန်းတော်ရာကိုတက် အကောင်းမြင်ပြုပြင်ဖို့ ပြောဆိုခွင့်ရခဲ့ပြီပဲ။
အကျဉ်းစံ အကိုတော် အမတော်အားလုံး
အမေရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက် ညီညာဖြဖြနဲ့
ပြည်သူ့အကျိုး သယ်ပိုးနေတာကို မြင်ချင်နေမိတယ် ။
ပန်းရိုင်းတို့ လန်းလာဖို့ အိပ်မက် မဝေးတော့ဘူး ထင်ရဲ့ အမေ။
ခွပ်ဒေါင်း အစစ်ရဲ့အတောင်တွေ နွမ်းနေပေမဲ့. .
မ၀ံ့မရဲမျိုးချစ်စိတ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးကိုတော့ သယ်ပိုးတုန်းပါအမေ။
တခါ တခါ ယိုင်းယိမ်လာတဲ့စိတ်တွေနဲ့ နဖူးနဲ့ဒူးတိုးတော့မယ်
တာလစ်ရဲ့ ငန်းနက်တွေ မြန်မာပြည်မှာ မြူးနေပြီဆိုပေမဲ့ . . .
ဧရာဝတီကိုတော့ သူရဲ့ငန်းနက်တစ်ကောင်မဖြစ်စေချင်ဘူး ။
၂၀၁၁ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၀)ရက်။
Posted by Maung Max @ Mr Puki at 8:53 AM No comments:
Labels: Abstract, Poem, Politics
သေသော်မှတည့် သြော် ကောင်း၏ - It's Better to Die than to Live
သေသော်မှတည့် သြော် ကောင်း၏ …
တိုင်းကြီးပြည်ကြီး၊ အချည်းနှီးလျှင် (တည့်)၊
ထီးသုဉ်း နန်းသုဉ်း၊ မြို့သုဉ်းသုည၊
သုဉ်းသုံးဝဖြင့်၊ သုဉ်းရပြန်လစ် (သုညရလစ်)၊
သေသော်မှတည့် သြော် ကောင်း၏ ... ။
~ ဆီးဘန်နီ (ဆီးပန်းနီ) ဆရာတော် ~
အာဇာနည် စာဆိုအကျော် ဆီးဘန်နီ (ဆီးပန်းနီ) ဆရာတော် ၏ ပါတော်မူတမ်းချင်း။
When magnificent influence and
Of the Konbaung Dynasty diminished,
The country was thus in peril.
In the Age of Chaos & Anarchy,
So-called in the Zeor Era
It's better to die with honour
Than to live with shame.
Si Ban Ni Sayardaw
(A poem on deportation of the King Thibaw, who was the Last King of Konbaung Dynasty in Burma)
Trans: Max | 30 July 2011
http://harrylwin.blogspot.com/2011/07/blog-post.html (for original poem in Burmese)
Posted by Maung Max @ Mr Puki at 8:21 PM No comments:
Labels: Patriotism, Poem, Translation
I rememberagentle and warm kiss on my cheek. And eyes withavery loving look too. I believe I was enjoying the affectionate kiss on my cheek and I longed for more. Withoutadoubt, it was one of the grateful and memorable moments of my life. It was the first time I remembered my mom kissed me on my cheek. It was so pleasant andawonderful experience. That’s how I learned aboutakiss. A very affectionate kiss fromamother to her lovely son. Every time I think of it, I feel good and nice. It gives me energy and motivation. So sweet!
In fact, there are many types of kiss – cheek kiss, French kiss, kiss of peace, kiss of respect, platonic kiss, romantic kiss, etc. Wiki states that the word “a kiss” isadescendent of the old English word “cyssan" meaning “to kiss". Many literatures and scientific research on human’s kissing are readily available online. They all indicate only one thing in common –akiss is an act of expression of affection and love of human beings. Did Adam kiss Eve in the Garden of Eden? Who teach Homo sapiens about kissing? An origin of human’s kissing remains unknown. Some scholars highlight that kissing is associated with the level of civilization. Does it really matter? No one cares and we kiss nevertheless to express affection and love to one another. Kissing is in fact beneficial to our health as it involves movement of the lower jaw (the sole movable bone in the head) and contraction of 34 muscles in the face, neck and head -- principally the orbicularis orbis, which surrounds the mouth and allows the lips to pucker. There are top ten health benefits from kissing. Another research indicates that 10% of human population does not know well about kissing. May be they are also in need of expressing their loves to others too.
Isakiss consideredasin? If so, love wouldn’t be preached to us in the first place. A kiss is an act of love andasign of affection. No doubt, kiss is notasin in any way. Viktor Frankl said, love is the ultimate and the highest goal to which man can aspire. To live and survive, love is essential. And love and kiss is inseparable. Kiss is thus also necessary for all human being. It could beakiss fromamother as well as from loved ones. Life is tough andalong journey! With love and sweet kisses along the way, I believe, life becomesapleasant journey.
A Kiss is more than justakiss - http://articles.latimes.com/2008/feb/04/health/he-esoterica4
Health benefits of kissing - http://www.bestkisses.com/kisses-for-health.html
Affairs of the kiss: Why we kiss - http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=affairs-of-the-lips-why-we-kiss&page=4
Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Kiss
Posted by Maung Max @ Mr Puki at 8:15 AM No comments:
Labels: Essay, Journal, Romance
Irrawaddy: the sole reason for existence of Myanmar
Though I wasn’t born in the caveman era, I can say for sure that today’s Myanmar (Burma) exist because of Irrawaddy. It’s justasimple but plausible guess. In those old days, cavemen look only for very basic things: food, shelter, water. Irrawaddy attracts many cavemen’s along the way to gradually start our civilization. As early as back in the 6th Century, Irrawaddy has been serving uncountable ancestors of Myanmar in many ways. If Irrawaddy wereaperson, she actually gives breastfeeding our ancestors and all of us. Rice we have asastaple food is usually coming from the Irrawaddy’s delta aka the rice bowl of Myanmar. Without making any complaint, she carries us on her back transport from lower to upper parts of the country. In short, Irrawaddy helps Myanmar to grow and glow for centuries. She is indeed our mother and Myanmar lifelong guardian angel. She is so many things for so many people we owes her so very much in so many lives. Now she is being threatened and in danger. Some wants to take her away from you forever.
Today, millions of people talk about capricious climate changes in every corner of the world. Most of these changes are resulted from, I believe, though I can’t quote statistically here, from many reckless actions by imprudent and irresponsible states’ actors i.e. governments. Many of their actions tamper with nature and asaresult millions of people suffer from the consequences arose.
Most of the environmental problems we are facing today would have been avoided if many of states’ actors in old days take time to think long-term consequences prior to carrying out certain policies and particular actions which may have negative impact on nature and ecology. Instead, in the race of development, nations take actions and formulate polices solely based on economic interest rather than the interests of the public or mother-nature.
“The Great Chinese Famine” aka “three bitter years” during Mao era in China in which both draught/bad weather & bad policies claimed more than 20 millions of people can be seen as an example of state’s actions based on economic interest. Not only China, but also US which now have spending great deal of tax payers’ money on fixing the problems created by the dams they have built in an half-century. With very little understanding of dams and their impacts on river, fifty years ago, the United States rushed intoawater development program.
China, one of the fastest growing economies in the world, takes seriously of its environmental issues at home. Many environmental related policies are laid down and formulated to limit various actions which have negative impacts to environment. For instance, logging is widely banned in China. However, China isagrowing giant which craves for natural resources including energy. Since it doesn’t want to hurt itself, based solely on economic interest, it engages with neighboring nations who are willing to fulfill its need. Social responsibility of Chinese Government towards citizenries from neighboring countries is very obvious to notice. Chinese Government is notoriously famous that it will engage in any arbitrary actions towards people in other nations as long as its national interests are served.
China knows well about dams and its negative impact on rivers. Recently, Chinese government admitted and acknowledged the problems of Three Gorges Dam – the world’s largest hydropower plant in China. Since, it doesn’t want to hurt itself more, its energy resources for nation’s growth are outsourced. Many teak forests from Myanmar have been disappeared during the short period of time. So are jades and rubies.
With agreement of Myanmar government,aChinese company whose is backed up by the Chinese government is building the largest hydroelectricity project with seven large Dams in the area where two rivers meet making Irrawaddy to flow downstream. The electricity from this project is mainly for the use in China. The size of the project is as big as New York City. I have no idea how these so-called patriotic and nationalistic Generals make this kind of agreement at the expense of Irrawaddy River. We owe her so much. In the end, we just sell her out. It has invaluable historical and cultural values to Myanmar civilization. With every patriotic blood cell in my vein, I urge all Myanmar people to join hand in hand to help and protect Irrawaddy from being harmed. She is the sole reason we exist as Myanmar today. Save Irrawaddy, please.
Posted by Maung Max @ Mr Puki at 8:30 AM No comments:
Labels: Essay, Irrawaddy, Journal, Patriotism, Values
We are walking in hell but we are happy gazing at ...